Review Archives - Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Review	What's New	What's Rising	What's Hot	What's New
Articles Review Tech
ဂိမ်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကဆော့ကြပါတယ်။ တချို့ကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခံစားချင်လို့၊ တချို့ကခဏတာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိဘဝထဲကရုန်းထွက်ချင်လို့၊ တချို့ကျေတာ့ဘဝအမောတွေပြေပျောက်ချင်လို့၊ တချို့ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုမှာ သက်ဝင်စီးမျောချင်လို့ အစရှိသဖြင့်ပါ။ ရုပ်ရှင်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်အလိုက်ကြည့်ကြသလိုပဲ ဂိမ်းတွေမှာလည်းရွေးချယ်ဆော့ကစားနိုင်မယ့် အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ကျောချမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့အကြောက်တရားကို လူတွေခံစားနိုင်အောင်ပေးစွမ်းဖို့အတွက် သရဲကားဆိုတာမျိုးကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လုပ်လာကျတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်း၊ ယုတ္တိတန်ပြီး ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ရသမြောက်လှတဲ့သရဲကားကောင်းများစွာရှိသလို ဂိမ်းတွေမှာလည်းအလားတူပါပဲ။ ဂိမ်းနဲ့ရုပ်ရှင် မတူတဲ့အချက်တစ်ချက်က ဂိမ်းတွေဟာ စိတ်နှစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနဲ့ ဝင်ရောက်ခံစားလို့ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဂိမ်းတွေထဲမှာ ချက်ချင်းပြန်လည်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့အခုဒီမှာ တကယ့်အကြောက်တရားအစစ်အမှန်ကို ခံစားမိစေမယ့်ဂိမ်းများကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ ကြက်သီးတွေထမသွားကြနဲ့ဦး။ (1) Dead Space ထိတ်လန့်စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဌာန်၊ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ Necromophs တွေဟာ Dead Space ဂိမ်းရဲ့သွေးပျက်စရာကောင်းမှုကို ပိုမိုလေးနက်စေပါတယ်။ […]
Vivo V5 က ဘာတွေ ပိုကောင်းလာလဲ
Mobile Review News Tech
Vivo V5 က ဘာတွေ ပိုကောင်းလာလဲ အခုတလော Vivo V5 က စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေကြားမှာ အတော်လေး လူပြောသူပြော များလာလို့ တချို့တွေလည်း စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကို ဘက်မလိုက်တဲ့ အမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်လည်ပြီး မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Vivo V5 သုံးစွဲဖို့ စိတ်ကူးနေကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စစချင်း ဖုန်းရဲ့ အသွင်အပြင်ကနေ စပြောပါမယ်။ Vivo V5 က နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်ကုန်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ ပိုပြီး ဂရုစိုက် ထုတ်လုပ်လာတဲ့ သဘောကို တွေ့လာရပါတယ်။ အရောင်က သုံးမျိုး ထုတ်ထားပါတယ်။ အခုလည်း V5 […]
Y53 Black Version အသစ် ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ပြီ
Y53 Black Version အသစ် ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ပြီ Vivo ထုတ်ကုန်တွေထဲက Y Series ကလည်း သုံးစွဲသူတွေ အတော်လေးကို နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ Serie ဖြစ်ပါတယ်။ Y Series ထဲကမှ Y53 ကို မူလက Crown Gold နဲ့ Space Gray ဆိုပြီး အရောင် ၂ မျိုးထဲ ထုတ်လုပ်ထားပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ Black color ကိုပါ ထပ်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Y53 ဟာ 8MP နောက်ကင်မရာကြောင့် ရှုခင်းပုံ ရိုက်ကူးလိုသူတွေ၊ မှတ်တမ်းပုံ ရိုက်ကူးလိုသူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလည်း […]
Vivo Y55s ထက်စာရင် Vivo V5 မှာ ဘာတွေပိုပြီး ထူးခြားလာသလဲ
Lifestyle Mobile Review Tech
Vivo Y55s ထက်စာရင် Vivo V5 မှာ ဘာတွေပိုပြီး ထူးခြားလာသလဲ။ “Perfect Selfie” ဆိုပြီးတော့ ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ Vivo V5 ဟာ ခုနောက်ပိုင်း လူအများအပြားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ V5 မှာ ဘယ်အချက်တွေ အားသာချက်ရှိနေတာလဲ။ သူ့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေထက်စာရင် ဘာတွေများ ပိုပြီးဆန်းသစ်လာလို့လဲဆိုတာကလည်း Vivo ပရိသတ်တွေ မေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ Vivo ရဲ့ Y55s နဲ့ V5 က ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီဇိုင်းပိုင်းသိပ်မကွာခြားပါဘူး။ Y55s ရဲ့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 5.2” သာရှိပေမယ့် V5 ကတော့ 5.5.” ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ရဲ့နှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေစာဖတ်တာ၊ e-book တွေဖတ်ရတာကို နှစ်သက်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ […]
Vivo ရဲ့ V5 အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့နည်းပညာလောကသားများ
Selfie ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ရှာဖွေနေပါသလား
Selfie ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ရှာဖွေနေပါသလား စမတ်ဖုန်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် Selfie ကိုအသားပေးတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာ အများကြီးမရှိပါဘူး။ မိန်းကလေးအများစု ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် Selfie ရိုက်တာပိုများသလို Facebook ပို့စ်တော်တော်များများမှာလည်း Selfie ပုံတွေလည်းကြီးစိုးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရင် Selfie ဆွဲဖို့ရှေ့ကင်မရာက ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Selfie ဖုန်းတချို့ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် နည်းပညာဆိုတာက တစ်နေ့တခြားဆန်းသစ်နေတာပါ။ ဒီလိုဖုန်းတွေကြားထဲမှာမှ Selfie အသားပေးတဲ့ Vivo V5 ဖုန်းက ပိုမိုဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ မကြာသေးမီက ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Selfie အသားပေးတဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ရှေ့ကင်မရာ 20 MP နဲ့ ပွဲထုတ် လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ 20 MP ဆိုတာက ရှေ့ကင်မရာအတွက်ဆိုတော်တော်ကြီးကို ကောင်းလွန်းနေပါပြီ။ ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကွက်တစ်ခုက […]
Vivo ရဲ့ V5 Matte Black ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
Mobile Review Review Tech
Vivo ရဲ့ V5 Matte Black ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း Vivo ရဲ့ထုတ်ခဲ့သမျှဖုန်းတွေထဲမှာ V5 ကတော့ နာမည်တော်တော်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးအစားပါ။ မကြာသေး တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း Vivo က V5 Matte Black (Limited Edition) ကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ငွေကျပ် သုံးသိန်းကျော်လောက်သာ ကျသင့်မယ့် ဒီဖုန်းမှာဘာတွေထူးခြားချက်ရှိသလဲဆိုတာကို လေ့လာသုံး သပ်ကြည့်ရအောင်။ ကင်မရာ Facebook သုံးစွဲမှုနဲ့အတူ Selfie ဆွဲတာကလည်း လူကြီးလူငယ်တွေကြားထဲမှာ တော်တော်ခေတ်စားလာတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒီဖုန်းရဲ့ အရှေ့ကင်မရာက 20MP အထိအထောက်ပံ့ပေးထားသလို အလင်းစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ကင်မရာအနေအထားအရ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ Selfie ဆွဲဆွဲ ကောင်းမွန်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေရရှိနိုင်မှာကတော့ သေချာပါတယ်။ အလင်းစနစ်ပါဝင်တဲ့အတွက် ညဘက် […]
Articles News Review Tech
ကျောင်းသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Laptop တွေက ဈေးကြီးနေလို့ စိတ်ညစ်နေသလား ? ဒါမှမဟုတ် ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ၀ယ်ပြီးမှ မကောင်းမှာစိုးရိမ်နေတာလား ? ဒါဆိုရင်တော့ အခရာပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့် နဲ့ Review ကောင်းကောင်းရထားတဲ့ Laptop 4မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Asus VivoBook E200 HA ဒီ Laptop ရဲ့အလေးချိန်ကတော့ 980ဂရမ် ရှိပြီး Quad-Core Intel Atom X5-Z8350 Processor အသုံးပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အကျယ်အ၀န်းအနေနဲ့၁၁.၆ လက်မရှိပြီး အထူအနေနဲ့17mm ရှိပါတယ်။ Pixel Screen ကတော့ 1366×768 ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Battery သက်တမ်း ၁၂နာရီထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး […]
ကိုယ့်အိမ်မှာ အပန်းဖြေဖို့အတွက်ဆို TV လား … ပရိုဂျက်တာလား
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ TV အကြီးစားကြီး တစ်ခုလောက်ထားရှိမယ့်အစား နေရာမစားတဲ့ ပရိုဂျက်တာတစ်ခုနဲ့သာ အလုပ်ဖြစ်အောင်ထားကြတာမျိုး ခေတ်စားလာပါတယ်။ လက်မ ၈၀ TV တစ်လုံးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ခံစားနေရတာထက် အကုန်အကျပိုသက်သာတဲ့ ပရိုဂျက်တာနဲ့ လက်မ ၁၂၀ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတာက ပိုပြီးတော့ အရသာရှိတယ်လို့ TV အစား ပရိုဂျက်တာကို အသုံးပြုနေသူတွေက ထောက်ခံကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့တော့ TV အသုံးပြုမှုသာ များပြားလျက်ရှိနေပြီး အနည်းငယ် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ပရိုဂျက်တာကို အသုံးပြုမှုတော့ နည်းပါးလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ပရိုဂျက်တာထားတာက ကောင်းမလား ၊ TV ကပဲ သင့်တော်မလားဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးသုံးသပ်နိုင်မှာပါ။ ကဲ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပရိုဂျက်တာတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံအကြောင်းလေးတွေကို […]
MWC ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းဆုရရှိခဲ့တဲ့ Sony Xperia XZ Premium ဖုန်းရဲ့ လက်စောင်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များ
ဘာစီလိုနာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MWC 2017 ပွဲမှာ အင်အားကြီး Samsung ရဲ့ လဲကျချိန်နဲ့ အတွေ့ အခွင့်အရေးရယူနိုင်ခဲ့သူကတော့ Sony ပါပဲ။ Sony ဟာ သူတို့ရဲ့ အဓိက Flagship တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xperia XZ Premium ဖုန်းအပါအဝင် ဖုန်းမျိုးဆက်သစ် သုံးလေးမျိုးကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ Xperia XZ Premium က မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်ကိုက်ခဲ့ပြီး အားလုံးအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့အပြင် အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဆုကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Akhayar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် XZ Premium ဖုန်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဖုန်းထွက်လာလို့ရှိရင် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ 4K HDR Display နဲ့ထွက်ရှိလာပြီး […]
အကြောက်တရားအစစ်အမှန်ကို ခံစားမိစေမယ့်ဂိမ်းများ	Min Thu Kha
Vivo ရဲ့ V5 Matte Black ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း	Min Thu Kha
HTC ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် HTC Bolt ဖုန်းကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း (Review)	Joker
ကိုယ့်အိမ်မှာ အပန်းဖြေဖို့အတွက်ဆို TV လား … ပရိုဂျက်တာလား	Joker
Y53 Black Version အသစ် ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ပြီ	Min Thu Kha